Hong Kong mogul Jimmy Lai anodaidza varatidziri vadiki kuti vangwarire
By bryamangwanabe Last updated Nyamavhuvhu 13, 2020
Hong Kong mogul Jimmy Lai - munhu akakurumbira kuvharirwa pasi pemutemo mutsva wekuchengetedzeka - yambiro vechidiki varatidziri kuti vanofanirwa "kungwarira" izvozvi.
VaLai vakasungwa neMuvhuro uye mapepanhau avo akarwiswa nemazana emapurisa, muzviratidziro zvakashamisa vazhinji.
Achitaura mushure mekuburitswa kwake mubheya, Mr Lai akaudza BBC kuti anotenda kuti kusungwa kwake "kwaingova kutanga".
Pachave ne "kurwa kwenguva refu" kusununguka kweHong Kong, akawedzera.
VaLai, avo vanga vachitungamira pro-democracy izwi uye mutsigiri wekuratidzira kwakaitika gore rakapera, ndeveApple Daily, rimwe remapepanhau anoverengwa muHong Kong.
Iye nevamwe vapfumbamwe vasungwa vakasungwa neMuvhuro vachipomerwa mhosva yekudyidzana nemauto ekunze, pasi pemutemo wekuchengetedza nyika wakapihwa neChina munaChikumi.
Mafungu ekusungwa akaswededza kutya kuti China iri kushandisa mutemo mutsva kuita kupaza kwakasimba pane vanoita zvekuratidzira uye zveHong Kong zviverengero.
Vachitaura neNewshour pa BBC World Service, VaLai vakati vakashamisika kuona mapurisa achisvika pamba pake neMuvhuro mangwanani.
Nhoroondo yevhidhiyoHong Kong media mogul Jimmy Lai yakaburitswa pane bail
Kunyangwe iye akange ambosungwa zvisati zvaitika, "zvaityisa" nekuti zvakawira pasi pemutemo wekuchengetedzeka wenyika yeChina, akadaro.
Vanakomana vake vaviri vakasungwa pa "manyepo enhema", akadaro, achiwedzera kuti haana kuzvidemba pamusoro pekuratidzira kwake kuzvitonga kuzere.
"Pandakanga ndiri muchitokisi ndakatadza kurara ... ndakafunga, dai ndaiziva kuti izvi zvaizoitika kwandiri, [zvakanyanya] kunetsa [nzira], ndingadai ndakaitawo here?"
"Ndingadai ndisina [ndakazviita] neimwe nzira - ndiwo hunhu hwangu," akawedzera.
Nekudaro, akanyevera varatidziri kuti vanofanirwa kuve "vanongwarira zvakanyanya mukupokana kwedu kuchengetedza mutemo wemutemo uye nerusununguko rwedu" sezvo mutemo mutsva wekuchengetedza wakaita kuti nharaunda ive nengozi kune vanoita zvechisimba.
"Isu tinofanirwa kuve takangwarira uye takasununguka mukupesana kwedu" ... hatigone kunge takasarudzika sepakutanga - kunyanya vadiki - nekuti zvakanyanya kunaka [isu tiri, vapfupi iyo nguva yeupenyu hwekutambudzika kwedu.
“Isu tinofanirwa kushandisa pfungwa dzedu uye moyo murefu nekuti ndeyekurwira ende. "
Kusungwa kwaVaLai kwakarumbidzwa neveChina vezvenhau, avo vakamurondedzera se "mutsigiri webongozozo" uye zvinyorwa zvake "vachimutsa ruvengo, vachiparadzira runyerekupe nekusvibisa vatungamiriri veHong Kong. uye kondinendi kwemakore ”.
Jimmy Lai ndiani?
Muzvinabhizimusi uyu anofungidzirwa kuti anofanirwa kudarika $ 766 billion (£ XNUMX miriyoni).
Paakaita mari yake yekutanga muindasitiri yezvokupfeka, akazopinda mune vezvenhau uye akatanga Apple Daily, inowanzotsoropodza hutungamiriri hweHong Kong uye nyika yeChina.
Muna 2019, zuva nezuva raive iro kuverenga zvakanyanya kubhadharwa bepanhau, zvese nekudhindwa uye online, maererano neChina University yeHong Kong.
Mr. Lai anga arimowo anorwisa Beijing iri kuramba yakabatisisa paHong Kong. Muna 2019, akatsigira nekutora chikamu mukuratidzira demokrasi uko kwakagara kwemwedzi yakawanda mundima.
Kambani inobata bepanhau reApple Daily yakaona chikamu chayo neChipiri, vanhu veHong Kong vachiungana vakatenderedza pepa ndokutenga zvikamu mumakambani mushure mekusungwa kwaVaLai.
Ndiani mumwe akasungwa?
muzvinambiriVatsigiri veAgnes Chow ane makore makumi maviri nematatu vakatanga kumuidza "iye Mulan chaiye"
Vakabatana naVa Mr. Lai nevanakomana vake vaviri vaive pakati pevaya vakasungwa Muvhuro.
Zvichakadaro, mutungamiriri wechidiki anoratidzira Agnes Chow akasungwa, pamwe naWilson Li, anoshanda semutori wenhau weUK-based ITV News, uye anorwira Andy Li.
Ms Chow akaburitswa pabhiri neChipiri manheru ndokuudza vatori venhau: "Zviripachena kuti hurumende iri kushandisa National Security Law kudzvinyirira vanopokana nezvematongerwo enyika."
Ndeupi mutemo mutsva wekuchengetedza?
Hong Kong yakafarikanywa yakakura kwazvo yekuzvitonga kubva pakudzoka kwavo kubva mukutonga kweBritain kuenda kuChina kutonga muna 1997, uye vanhu vayo vanonakidzwa zvakanyanya nerusununguko rwekutaura uye vezvenhau kupfuura vanhu vari kune mainland.
Asi izvo zvikuru zviga zvemutemo mutsva zvinosanganisira kuti mhosva dzekureurura, kupandukira, ugandanga uye kubatanidzwa nemauto ekunze zvinotakura mutongo wakakura wehupenyu mutirongo.
Izvi zvinoita kuti zvive nyore kuranga vanoratidzira uye kuderedza kuzvitonga kweHong Kong.
Mutemo unopawo Beijing simba rekugadzira hupenyu mune yaimbova Britain koloni nenzira isina kumbobvira yaita.
Vanotsoropodza vanoti zvinobudirira kudzora kuratidzira uye rusununguko rwekutaura. China yakati mutemo mutsva uchadzoreredza matunhu mushure megore rekusagadzikana.
Ichi chinyorwa chakatanga kuoneka pa: https://www.bbc.com/news/world-asia-china-53748285
GANTI PlAT NOPOL MENJADI "XNXX" MOTOR PELAJAR DIAMANKAN POLISI - Vhidhiyo
DrDisrespect RUDZIDZO KUBAN… Shane Dawson vs Jaden Smith, Ice Poseidon, Pokimane, Fedmyster - Vhidhiyo